नाकको वरीपरीको ब्ल्याक हेड्स हटाउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए यसरी गर्नुहोस् कफीको प्रयोग – Jagaran Nepal
नाकको वरीपरीको ब्ल्याक हेड्स हटाउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए यसरी गर्नुहोस् कफीको प्रयोग
आज भोलि धुँवा धुलो आदिका कारण अनुहारमा ब्ल्याक र व्हाइट हेड्स देखिनु सामान्य जस्तै भएको छ । अधिकांश मानिस यो समस्याबाट पीडित छन् । यो समस्या कुनै पनि उमेर समूहका व्यक्तिलाई हुन सक्छ । तर, विषेशगरी किशोरावस्थामा बढी देखिन्छ । व्हाइट हेड्स हटाउने उपाय अनेक छन् । तर, यो समस्याको समाधान भान्साबाटै पनि गर्न सकिन्छ ।
छालाको प्रकार र अवस्था जस्तो सुकै भए पनि ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्स हटाउन घरेलु उपाय बढी फाइदाजनक हुन्छ । तपाईले प्रयोग गर्ने कफीको स्क्रबबनाएर अनुहारमा भएको ह्वाइट र ब्ल्याक हेड्स सजिलै हटाउन सक्नुहुन्छ ।
कफिको स्क्रबलाई दाग हटाउन यसरी प्रयोग गर्नुस्
१. दही, कफी र बेसनको कमाल दुई चम्चा दहीमा एक ठूलो चम्चा कफीको धुलो र बेसन मिसाउने । उक्त मिश्रणलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर अनुहारमा लगाउने र हल्का हातले मसाज गर्ने । मसाज गर्दा ध्यान दिनेकी उक्त पेस्ट जहाँ धेरै व्हाइट र ब्ल्याक हेड्स छन् त्यहाँ लगाउनु पर्छ ।
२. मोइस्चराइजर लगाउन नबिर्सौ गोलाकार अवस्थामा दुई देखि तीन मिनेटसम्म मसाज गर्नुपर्छ । त्यसपछि सफा पानीले अनुहार धुने । टोनरको प्रयोग गर्ने साथै अनुहारमा मोइस्चराइजर पनि नबिर्सी लगाउने ।
३. मेकअप सफा गरेर लगाउने पेस्ट तपाई सातामा इच्छा अनुसार यो पेस्टको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । ध्यानदिनुहोस् की कफी, बेसन र दहीको यो पेस्ट अनुहारमा लगाउनु भन्दा पहिले अनुहारमा भएको मेकअप सफा गरेर मात्र लगाउनु पर्छ ।